[Maxaa keenay] isbeddelka siyaasadda IMAARAADKA CARABTA ee Soomaaliya?
Friday June 11, 2021 - 14:38:55 in Wararka by Ali Adan
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carbeed oo in mudda ah heerkii ugu hooseeyay marayay ayaa u muuqda mid isbeddel aan la filayn ku socdo. Ra'iisalwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) Maxamed Xuseen Rooble ayaa June 8, 2021 qaabbilay
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carbeed oo in mudda ah heerkii ugu hooseeyay marayay ayaa u muuqda mid isbeddel aan la filayn ku socdo. Ra'iisalwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) Maxamed Xuseen Rooble ayaa June 8, 2021 qaabbilay Danjiraha Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Axmed Othman Al-Hammadi oo aan tan iyo December 2019 cag soo dhigin dalka.
Dhinaca kale, Riyaad iyo Abu Dhabi oo u muuqday kuwo aan kala maarmi ayaa isku seegay dhaqan-siyaasadeedkii "muruq isku muquuninta” oo Amiir Maxammed bin Zayed al-Nahyan uu ku wiiqi jiray dalka danaha dalkiisa ka horyimaad.
Waxase cajiib leh in dib uga gurashadii Farmaajo afgambigii dimuqraadiyadda uu laftiisu dhalay rajo aan horray loo filayn. Wasiirka Arrimaha Dibedda DFS oo kaashanaya shirkadda LFA Holding oo ah "lobbyist” ayaa awood u helay inuu xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka iyo "State Department”-kaba hordhigo aragti ka duwan tii laga qabay dalka.
Amiir Maxammed bin Zayed oo ka cagajiidayey inuu fool-ka-fool ula kulmo Amiirka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda Turkiga oo xiriir qabow ka dhexeeyo ayaa imaan shirkii Jeddah taas oo dhalisay su’aasha maqaalka ee ahayd, "Soomaaliya ma ka dhalan kartaa xasillooni dadaalkeedu aysan qayb ka ahayn Imaaraadka?”
Si kastaba ha ahaate, Dal-Jire Soomaaliyeed oo daahsan ayaa yiri "Awood kasta ee shisheeye oo isku dayday in ay Soomaaliya ku dhisto-sawirka-riyadeeda, ayaa ka tegi ayadoo madax wareer la rajo beeshay. Soomaalida keliya ayaa go’aansaneysa mustaqbalkeeda sida fiican ama xun. Sheekhyada Gacanka Carbeed [Imaaraadka], waxaa laga yaabaa inay si deg deg ah u bartaan casharkaas” (The American Interest – 23/03/2018).